पश्चिम जाजरकोटमा वर्षौँदेखि तुइनको सहारामा वारपार गर्दै स्थानिय,सरकारले खै देखेको?भोट मात्र लिने? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पश्चिम जाजरकोटमा वर्षौँदेखि तुइनको सहारामा वारपार गर्दै स्थानिय,सरकारले खै देखेको?भोट मात्र लिने?
जाजरकोट – पश्चिम जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाबाट छेडागाड नदी तरेर छेडागाड नगरपालिकाको का’र्कीगाउँ जान शिवालय गाउँपालिका–१ सालतडा र शिवा’लय गाउँपालिका–९ बा’लुवामा वर्षौँदेखि तुइ’नको सहा’रामा वार’पार हुँदै आएको छ । दैनि’क त्यही तुइनको सहा’राबाट स्थानीय वार’पार गर्छन् ।
जाज’रकोटको शिवा’लय गाउँपालिका–१ का कालीबहादुर पुन नदी तरेर पारीपट्टि जानु परे तु’इनकै सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् । नजि’कमा पुल नहुँदा छे’डागाड तर्न तुइनकै सहा’रा लिनुप’रेको उहाँको भनाइ छ ।
Previous दिनहुँ घाँस का’टी खाली खुट्टा हिड्दै विद्यालय गएको हुँ’ मनै रु’वाउने कु’लमानको जीवनकथा हेर्नुहोस।
Next १२ बर्षिय बालिका सम्झना कामिलाइ आफ्नै गाउँका दाजुभाइहरुले ब’ला’त्का’र गरि ह’त्या गरेर फालिदिए।